ukufa World uMvangeli uReinhard Bonnke kaThixo | Apg29
Izigidi watyelela iintlanganiso zayo kunye nabantu zazisoloko basindiswe.
Abantu abaninzi sasindiselwa emva intshumayelo yakhe waza wathandaza abagulayo. Emva koko uza emva mfazi ngesitulo esinamavili, wabeka isandla sakhe olova ku ibunzi lakhe waza hamba naye ke, waza waqalisa ukuhamba.
UReinhard Bonnke wayengu mvangeli ngamaKrestu ehlabathini kanye ngumshumayeli. Waqala umsebenzi wakhe yokuvangela kwi 1970 kunye neentlanganiso ententeni enkulu. Kamva, xa efika iintlanganiso ezinkulu wabheka phezu endle enkulu. E Nigeria watyelela izigidi iintlanganiso zakhe.
UReinhard Bonnke wayeneminyaka engama-79 ubudala. Lo mfanekiso phezulu ukususela ngowama-2014 kwaye othathwe Wikipedia.
Mna ndivile uReinhard Bonnke ukushumayela izihlandlo ezimbalwa kunye nabantu babelufumana basindiswe. Kukholelwa ukuba ukuya kwizigidi 75 namamkelayo uKristu Yesu yaye wasindiswa inkonzo yakhe yokuvangela!
Washumayela nemikhankaso imvuselelo enkulu kulo lonke ihlabathi, waza wasebenza iminyaka engama-60 njengokuba womshumayeli weendaba. Izihlandlo eziliqela kwakhona watyelela Bonke Sweden. Kananjalo apha aba bantu basindiswe ngalo ulungiselelo lwakhe.
Kwiminyaka emininzi eyadlulayo, xa ndaya yeSikolo seBhayibhile ngePentekoste e Jonkoping Pentecostal ecaweni saya kwi uhambo iklasi eMpuma Yurophu, kodwa wayethe ibhasi uhambo lwethu esixekweni Hannover kwi owayephila West Jamani waliphulaphula uReinhard Bonnke kwi rally phulo.
Abantu abaninzi sasindiselwa emva intshumayelo yakhe waza wathandaza abagulayo. Ndaza ndaqaphela umfazi ehleli kwisitulo sezigulana esinamavili. Wabeka izandla zakhe phezu kwabo bafika, ngoko nkqu mfazi ngesitulo, waza waqhubeka. Ndajonga ngenyameko ukuze ubone ukuba nantoni na eyenzekayo. Kodwa akukho nto yenzekayo.
Emva koko uza emva mfazi ngesitulo esinamavili, wabeka isandla sakhe olova ku ibunzi lakhe waza hamba naye ke, waza waqalisa ukuhamba. Saba phezu uhambo zaye ngokothuka ngokucacileyo kwaye babengenako ukukholwa amehlo ethu. Andazi ukuba yintoni na engalunganga kuye, kodwa ndiyazi ukuba wavuka, wahamba.
izigidi Won uYesu Kristu
Inkokeli Swedish bakwaMoya Daniel LM ukubhala on Twitter :
"UReinhard Bonnke iphumelele izigidi ngenxa kaKristu. I kuyivuyela kakhulu kunene. Yena wayengumshumayeli bakwaMoya yamandulo. Ndisakhumbula xa ndamphulaphula eBerlin, Sweden kunye kungu 2018 e-Helsinki. Phumla ngoxolo, uMnu" Ich bin uMvangeli! " .
Namhlanje, umvangeli uReinhard Bonnke ikhaya kaYesu emva kokwenza womshumayeli weendaba zakhe nangezenzo kakuhle!